Cryptocurrencies: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, ... ihe niile banyere cryptos | Akụkọ akụrụngwa
El ụwa nke cryptocurrencies ọ na-esikwu ike kwa ụbọchị. Afọ ole na ole gara aga ọnụ ọgụgụ ndị na-etinye ego na ndị na-etinye ego na cryptocurrencies bụ obere ma kwa ụbọchị ọtụtụ mmadụ na-abanye na mgbanwe mgbanwe a nke gụnyere ntinye nke cryptocurrencies na ahịa ego.
You ma ihe Bitcoin bụ? Ọ ga-amasị gị zụta Bitcoins? Ị maara kedu ihe bụ ethereum Do makwaara ike nke ikpo okwu a nwere ike inye gị? Gịnị bụ ndụdụ Bitcoin? Kedu ihe dị iche n'etiti Bitcoin na Bitcoin Cash? Kedu ego Litecoin na olee etu o si dị iche na Bitcoin? Kedu ihe bụ ICO na kedu ka m ga esi etinye ya na ya? Kedu ihe mkpuchi nke ga-abawanye uru ha na ọnwa ma ọ bụ afọ ndị na-abịanụ?
Ajụjụ ndị a niile bụ ndị ọtụtụ mmadụ na-ajụ onwe ha kwa ụbọchị ma site na Actualidad Gadget anyị ga - enyere gị aka ịghọta ngalaba ọhụrụ a nke ọma.
Ihe ndị dị mkpa gbasara Cryptocurrencies
Ọ bụrụ na ị na-amalite ụwa nke cryptocurrencies mgbe ahụ Isiokwu ndị a ga-enyere gị ezigbo aka.
Comprar Bitcoin: kedu ihe Bitcoin, otu o si arụ ọrụ na otu esi azụta bitcoins
Zụta Ethereum: kedu ihe bụ Ethereum na otu esi azụta ndị ọzọ.
Zụrụ Litecoin: gini bu Litecoin na otu esi azuta ya
Hashflare, igwe ojii cryptocurrency Ngwuputa nyiwe.
Akụkọ Cryptocurrency na Nkuzi
Chọpụta ọhụrụ cryptocurrency ozi ọma na Nkuzi inwe ike itinye ego ma rụọ ọrụ na mpaghara a yana nkwa zuru oke.
por Miguel Gaton eme 2 afọ .
Mgbe mbido na ọdịda niile soro ndụ nke cryptocurrencies n'akụkọ ihe mere eme ya, ya ...
Kedu ihe mkpuchi iji zụta ịmalite ịmepụta pọtụfoliyo nke akụ akụ
por Akụkọ akụrụngwa eme 2 afọ .
Agbanyeghị na ọ bụghị mgbe niile ka ị ga-adị ndụ dị ka ilu ndanda na akụkọ a, ọ bụghị ihe ezi uche dị na ịme cicada, na ...
Ogologo oge Cryptocurrencies ahapụla niche nke naanị ịmata ka ọ bụrụ, n'onwe ha, a ...
Ahịa cryptocurrency, yana Bitcoin na mbu, anaghị enwe afọ kacha mma. Uru ya adaala ...
Facebook na-ezube imepụta nke ya cryptocurrency
Oge mkpuchi cryptocurrency agabeghị. 2018 adighi adi nma maka ahia a, ...
Ọnwa ndị a anyị na-ahụ ọtụtụ ụlọ ọrụ na-akụ nzọ na Blockchain, nke ọtụtụ na-ahụ dị ka teknụzụ nke ọdịnihu. Oke…
Oge ụfọdụ gara aga Telegram kwupụtara ọkwa ya na Gram na ahịa cryptocurrency. Iji malite ọrụ a, ...
Nnukwu ihe ndọghachi azụ maka WikiLeaks. Ebe ọ bụ na a na-egbochi akaụntụ ha nwere na Coibase. Mkpebi nke ...
Ojiji nsogbu cryptocurrency dị ka abịabeghị na njedebe. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị ọrụ na-aga n'ihu na-egwupụta Bitcoin ...
N'ime afọ 2017 dum, anyị ahụla etu mkpuchi, dị ka Bitcoin, Ether na ndị ọzọ, siri gbagbue nke ọma ...
Otu ndị injinia na-arụ ọrụ na Federal Nuclear Center na Russia, ụlọ ọrụ nuklia nzuzo nzuzo, abụrụla ...